Global Voices teny Malagasy » Ny Loza Mitatao Raha Mihevitra Hetsika Miaramila Hamelezana An’i Korea Avaratra · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 22 Septambra 2017 8:00 GMT 1	 · Mpanoratra Jonathan Augustine Nandika miora
Sokajy: Amerika Avaratra, Azia Atsinanana, Etazonia, Japana, Korea Atsimo, Korea Avaratra, Ady & Fifandirana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Hevitra, Mediam-bahoaka, Politika, Tantara, Ny Tetezana - The Bridge
Ao anatin'ny fifanolanana amin'izao fotoana izao amin'i Korea Avaratra, ny hevitra tena masaka an-dohan'ny governemanta amerikàna dia ny hamantatra raha toa ka mety hanohintohina ny firenena amerikàna ny fanafihana atao amin'i Korea Avaratra . Raha resaka ambony latabatra dia tokony hiaro an'i Korea Atsimo sy Japàna mpiaradia aminy i Etazonia. Kanefa, raha tena miasa loha marina momba ny fitonian'ireo mpiaradia aminy ny manampahefana, tena faran'izay manahirana ny fihantsiana mpanao didy jadona iray efa very fanahy mbola velona izay efa nilaza ampahibemaso fa mihevitra ny handefa balafomanga hamely an'i Korea Atsimo sy Japàna, izy roa ireo izay samy manana toerana saropady amin'ny fomba fijery stratejika sy ny maha-olona.
Tsy tapaka ampahafantarin'ny  tafika amerikàna ny mety ho faharavàna aterak'ireo fitaovam-piadiany famakiana “bunkers”, izay ny tena tanjona dia ny “hanapahana” ny lohan'ny fitondràna ao Korea Avaratra. Lazain'ireo manampahaizana ara-tafika fa balafomanga Tomahawk miisa 300 dia ampy handemena ny tafik'i Korea Avaratra, saingy io tsy miantoka ny ho fahapotehana tanterak'ireo balafomanga rehetra sy fitaovam-piadiana nokleary misy, raha toa izy ireny ka miaraka alefa avy any aminà tobim-pamaharana miafina, na fitovana mifindrafindra sy sambo nokleary mpisitrika an-dranomasina.
Toy ny noterena hanana fisainana miaina fahirano ny fitondràna ao Pyongyang — tahotra raikitampisaka hoe hampiasa ireo fitovampiadiana mahazatra ry zareo ao Etazonia mba hamongorana azy ireo amin'ny fotoana rehetra. Toa maneso anefa, fa raharaha mampikorotan-tsaina no iainan'izao tontolo izao ankehitriny hoe na ny mpitantana ao Etazonia amin'izao fotoana izao aza dia tratry ny vela-pandrika ara-tsaina toy izay ihany koa. Raha ny ao Pyongyang manosika hatrany ny firosoany mankany amin'ny fanapariahana ireo ICBMs mitondra loha nokleary , ny fitantanan'i Trump indray mety manao famintinana hoe ny hany azony atao dia ny manafika avy hatrany, na eo aza ny mety ho fahavoazana tsy iriana aterak'izany amin'ireo mpiaradia aminy.
Tena manelingelina ny hoe filoha, praiminisitra ary mpanao jadona tahaka izany no manana fahefana hampirefotra fitaovam-piadiana mahavono marobe. Tsy voakina amin'ny fomba ofisialy ny maha-olompirenena ireny hery ara-tafika ireny na manome azy ireo io fahefana io amin'ny alàlan'ny fitsapankevitra na fomba hafa demaokratika. Rehefa manao jery todika mankany amin'ilay tetikasa Manhattan  ny olona, lasa miharihary sy mangirifiry ny fomban'i Jeneraly Groves, talen'ilay tetikasa, nandreseny lahatra ny filoha Truman  hanome alàlana ny fandatsahana ireo baomba atomika.
Mahagaga ny mahita hoe tsy misisika intsony amin'ny fanoheran-dry zareo ny fanafihana amerikana ampiharina amin'i Korea Avartra ireo mpitondra ao Korea Atsimo sy Japàna. Ireo Koreana maherin'ny 70 taona dia mahatsiaro amin'ny antsipirihany an-tsary  ny zera baomba namàfa an'i Pyongyang, ary mahafantatra fa hatezerana mitovy amin'izany no ho entin'ny tafik'i Kim Jong hamafàna an'i Seoul. Ny toerana misy an'i Japàna indray dia mijanona toy ny taloha hatramin'ny niakaran'ny Praiminisitra Abe ho eo amin'ny fitondràna. Tamin'ny filazàna fanohanana tsy misy fepetra ny politika ivelany arahan'i Trump, imbetsaka i Abe no nanambara fa ato ho ato i Japàna dia mety hanova ny lalàm-panorenany hamelàna ny tafika ao aminy “hiaro ny firenena”— fivoaran-draharaha iza tsy isalasalàna fa mety hanozongozona bebe kokoa ny ao Azia Atsinanana. Raha tokony hikatsaka fahatakarana ny lasa eo amin'izy samy izy, fomba fijery mankamin'ny fanavaozana momba ny Ady Lehibe Faharoa no nasesik'i Abe sy ny tarika tia tanindrazana mpahay tantara miaraka aminy, izay mandà ny fisian'ireo nantsoina hoe “vehivavy fampiononana” ary manamaivana ny asan'ireo Koreana 600.000 niaina tanaty fepetra feno hetraketraka. Raha ny marina, na any Korea Avaratra na any Atsimo, hatry ny ela ireo politisiana no nahatsapa ho notsiratsirain'ny tsy fisian'ny fahamatorana sy fivalozan'ny governamanta Japoney. 
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/09/22/107624/
 ny hevitra tena masaka an-dohan'ny governemanta amerikàna dia ny hamantatra raha toa ka mety hanohintohina ny firenena amerikàna ny fanafihana atao amin'i Korea Avaratra: http://thediplomat.com/2017/06/us-missile-defense-agency-head-north-koreas-icbm-ambitions-a-source-of-great-concern/
 Tsy tapaka ampahafantarin'ny: http://edition.cnn.com/2017/08/11/politics/us-north-korea-strike-first/index.html
 ICBMs mitondra loha nokleary: https://en.wikipedia.org/wiki/Intercontinental_ballistic_missile
 tetikasa Manhattan: https://www.britannica.com/event/Manhattan-Project
 nandreseny lahatra ny filoha Truman: https://www.publishersweekly.com/978-0-399-14072-3
 mahatsiaro amin'ny antsipirihany an-tsary: https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/aug/13/america-carpet-bombed-north-korea-remember-that-past
 nahatsapa ho notsiratsirain'ny tsy fisian'ny fahamatorana sy fivalozan'ny governamanta Japoney.: http://nation.time.com/2012/12/11/why-japan-is-still-not-sorry-enough/